Xubuntu 12.10 waxaa lagu heli karaa dukumiinti cusub oo qadla'aan ah | Laga soo bilaabo Linux
Xubuntu 12.10 ayaa lagu heli karaa dukumiinti cusub oo qadla'aan ah
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones, Qaybinta
Horaan uga hadalnay Ubuntu y Kubuntu 12.10 iyo dabcan, nooca leh Xfce ma aha mid aad uga fog, waana taas Xubuntu Waxay sidoo kale heshay horumarin cusub oo ay ka faa'iideysanayaan adeegsadayaasheeda.
1 Astaamaha Cusub ee Xubuntu 12.10
2 Beesha Xubuntu
Astaamaha Cusub ee Xubuntu 12.10
Xubuntu hada isticmaal Xfce 4,10, kaas oo ka faa’iideysanaya dhammaan isbeddelada iyo hagaajinta ay Degaankan Desktop-ku ku helay qaabkan. Tallaabo aad muhiim u ah aragtidayda iyo wax aan ku mahadnaqo, Dokumenti dukumiinti dib loo cusbooneysiiyay ayaa lagu soo daray.
Meeniska dalabka, dhammaan billaabayaasha la xiriira dejimaha ayaa hadda lagu soo ururiyey Maareeyaha Dejinta. Farshaxanka ayaa sidoo kale la cusbooneysiiyay, oo ay ku jiraan gidaarka cusub, cusbooneysiinta gudaha LightDM, Greybird iyo muuqaalka filimka gudaha Ulaquity. Tan dambe waxay sidoo kale saxaysaa khaladaadka qaarkood ee ay ku soo bandhigtay xilliga kala guurka.
Marka lagu daro dhammaan cusbooneysiinta iyo isbeddelada kor ku xusan, kooxda Xubuntu waxay si adag uga shaqeeyeen howlaha bulshada iyo suuqgeynta. Nuxurka websaydhka Xubuntu si dhammaystiran ayaa loo cusbooneysiiyay Xubuntu waxay hadda leedahay baraha bulshada oo kala duwan.
Más información: Bloguntu Xubuntu
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Xubuntu 12.10 ayaa lagu heli karaa dukumiinti cusub oo qadla'aan ah
Waan jeclahay Xubuntu, waxaan dareemayaa in cudurka vercionitis uu mar horeba i qaniinayo laakiin sifiican ayaan u xajinayaa, wali waxaan haystaa 2 sano iyo 6 bilood in LTS-gayga la joojiyo.
Afar maqaal oo isku xigta, "elav" ayaa maanta la waxyooday.
Haha, haba yaraatee, waxa dhacaya ayaa ah in waxyaalahan ay wanaagsan yihiin in la soo sheego, xitaa marka Internetka ay ka buuxaan wararka noocan oo kale ah .. 😉 Anigana waan u xiisay Lubuntu, laakiin maadaama aysan rasmi ahayn, iyo maadaama aanan wax dood ah lahayn. in laga hadlo waxa ku saabsan distro, waa hagaag ... waxba kamaan dhigin.
Halkan waxaa yimid kii ka yimid Lubuntu
Waxaan shakhsiyan jeclaan lahaa inaan ugu hambalyeeyo ragga ku jira Xubuntu shaqadan wanaagsan ee ay ka qabteen distoorkan, kaliya maahan sida ay u dhakhso badan tahay laakiin toke quruxda badan ee ay siiyeen xfce. sifiican loo qabtay
XFCE ma aha mid ay sameysay bahweynta Xubuntu. Ha ugu mahadnaqin iyaga laakiin horumariyeyaasha XFCE ee u dagaallamayay inay ka dhigaan mid la safeeyey.
Bob kalluumeysatada dijo
Xubuntu Fantastic. Qaybinta iga yaabisay fudaydkeeda, ilaalinaysa naqshad aad u raaxo badan oo raaxo leh.
Waan ku faraxsanahay inaad u hurtay gelitaan yar (qayb yar) qaybintaan "yari".
Jawaab Bob Fisher
Ma ahan sida ugu badan Xubuntu sida Xfce, laakiin wax badan ayaan uga hadlay balooggan. 🙂
Ugu danbeyn! Waa maxay war wanaagsan oo aad i siisaa! Oo maxaa la yaab leh: Waxaan u maleynayay in Ubuntu 12.10 la sii deyn doono "labaataneeyada" Oktoobar iyo in xubinta ka soo baxda ay soo muuqan doonto maalmaha ugu horreeya Nofeembar. Toddobaadkan dhammaadkiisa waxaan ku dhejin doonaa kombuyuutaradayda hadda haysta 11.10 iyo 12.04.
Xubuntu iyo Kubuntu labaduba waxay noqdeen xulashooyin aad ufiican tan iyo markii lagu wareejiyay Beesha.
War weyn. Waxaan isticmaali jiray Xubuntu 12.04 tan iyo markii ay soo baxday ... hadda waa inaan eegaa haddii aan cusbooneysiiyo ama aan joogo LTS.
Ku jawaab dango06
Waa hagaag in la isku dayo, waan jeclahay distoorkan. Aynu aragno haddii aan sidoo kale ku rakibi karo mawduuca Ubuntu (ambiance) midkan oo hadda qumman.
Hagaag, waqtigan xaadirka ah ma awoodo inaan rakibo Xubuntu, ma garanayo waxa dhaca, waxay kuxirantahay tilaabada labaad ee rakibida, waxaan isku dayay Ubuntu waxayna u dhacdaa si isku mid ah. Xilligan la joogo waxaan la socdaa Linux Mint xfce oo ii oggolaatay inaan rakibo. Maxay tahay shaqo, haddii Xubuntu ay tahay dalkayga !!
Waxaan qabaa isla dhibaatada a: S
Waa run in dadka Xubuntu ay baytariyada ku heleen horey qaabkii hore (12.04) tanina waxay cadeyneysaa jihada wanaagsan ee ay qaadeen. Xaqiiqda ah in qaabka bilicsanaanta loo qaatay si dhab ah (http://shimmerproject.org/about/) labadaba shabakadda iyo distoorkuba waxay horeyba u muujinayaan heerka ay ka go'an tahay dhammaan kuwa ku lugta leh.
Waxaan isku dayi doonaa inaan ku rakibo kumbuyuutarkeyga si aan u macsalaameeyo Linux Mint Debian Edition Xfce, isku day fiican laakiin wuxuu ku dhamaaday guuldarro, runtiina waxay sameeyeen qaladaad badan oo ka mid ahaa Xubuntu ka hor 12.04.
Muddo dheer baan booqanayay degelkan runtiina waxay ila muuqataa inay aad u wanaagsan tahay, inkasta oo aan hadda isdiiwaangaliyay. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo su'aal, waan ka xumahay jahwareerkeyga ... Suuragal ma tahay in la cusbooneysiiyo Xubuntu 12.10 qaabka aan hadda u shaqeynayo (kii hore, «Precise pangolin») anigoo ilaalinaya dhammaan dookha isticmaala, barnaamijyada iyo wixii la mid ah ...? (… Kaalay, sida yaa cusbooneysiiya Firefox-kooda) Miyaa tan lagula talinayaa mid cusub oo aad u dhib badan oo aan waxtar lahayn oo ku jira Linux sidayda oo kale? (Waxaan u maleynayaa inay run tahay).
Waxaan fursaddan uga faa'iideysanayaa inaan kuu soo diro salaan oo aan ugu hambalyeeyo qoraaga / qorayaasha boggan shaqadooda weyn ee macluumaadka ku saabsan. Markii aan go'aansaday inaan u wareego Linux (durba hubaal) waxay ku mahadsan tahay boggan iyo taladii aan halkaan ka aqrinayay. Waxay ila tahay aniga baloog cad, daacad ah, wax ku ool ah, oo naqshad wanaagsan leh waxaanan joojinayaa inaan kubbadda kaa dhigo hahaha .. maya si dhab ah, waa wax weyn. Kuwa aan wax badan aqoon oo raba inay ogaadaan, waa tan ugu fiican ee aan ka helay shabakadda.
By the way, anigu waxaan ahay isticmaale Xubuntu, waan ka faalloodaa maxaa yeelay midka Ubuntu wuxuu ka muuqdaa astaamaheyga.
Fikrad weyn oo ah Xfce, gaar ahaan kuwa leh amar caadi ah sida tayda oo kale.
Waxaan ka imid anigoo adeegsanaya Fuduntu 2012.04 oo ku jirta netbook AAOD255E ah oo leh 2GB RAM waana duulayaa, waxa aanan jeclayn ayaa ah arrinta qaybinta iyo wiki ay ku qoran tahay Ingiriisiga manaan helin bog caawimaad ama macluumaad ka siiyay adeegsiga amarrada qaarkood iyo codsiyada, sidan oo kale ayaan rakibay Lubuntu 1210 laakiin aniga waxay ila tahay inay culus tahay, oo aan sidii Fuduntu u fiicnayn ama xitaa markii hore markii aan isku dayay Kubuntu 11.04 iyo LinuxMint KDE masoo yareyn mashiinkeyga, waan soo dajinayaa Xubuntu waxaanan rajeynayaa way ii shaqaysaa
Waan ka xumahay inaan ka faalloodo W $ neceb laakiin waxaan u isticmaalaa oo keliya IDM, ma aanan helin bedelkiisa Linux, JDownloader mararka qaarkood wuu shaqeeyaa, mararka qaarkoodna maahan, (runtiina waan ka saaray) Kubuntu KGet waa mid weligeed ... oo xitaa aanan la socon FlashGot ama Aria2 waxaan awooday inaan ku guuleysto xawaaraha ama is-dhexgalka IDM, haddii aad taqaanno wax la mid ah fadlan ila soo tali.
Waa suoer wanaagsan ...
Kaliya markii aad soo degsaneyso xirmooyinka oo aad cusbooneysiineyso WAXYAABAHA AY YAHAN YAHAY.
Ma aqaano haddii ay lagama maarmaan tahay in loo beddelo server-ka ugu weyn halkii waddankeyga laga heli lahaa, waxaan lahaan doonnaa…. Waxyar ayaan u tijaabinayaa
Waad salaaman tihiin dhibaatooyinka isku dhejinta ubuntu iyo xubuntu. Markii aan rakibo xubuntu waa la qaboojiyaa meesha aad dooratid inaad ku rakibtid ama aad tijaabiso isla markaana si lama filaan ah shaashadda badhkeed waxay u egtahay mid fiican oo kan kale wuu xumaaday markii aan rakibo Ubuntu wuxuu ku dhejinayaa shaashadda rakibidda ama qoraal kasta oo gacanta ah: Waxaan ahay newbie
Qoraal horumarsan oo ku jira Bash (bash + md5) si loo ilaaliyo 'wax' (+ Faahfaahin faahfaahsan)